MATE 1.6 misy amin'ny fanatsarana maro | Avy amin'ny Linux
Misy MATE 1.6 misy fanatsarana maro
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fisehoana / personalization
Ny fork an'ny GNOME2 misaraka tsikelikely amin'ny spawn izay nanamboarana azy ary lasa tontolo iainan'ny Desktop ankehitriny sy moderina kokoa. Azontsika jerena amin'ny fanambarana ofisialy ny famoahana ny MATE 1.6.
Mariho fa tsy vitsy ny fanovana. Amin'ity famoahana ity dia fonosana sy famakiam-boky efa lany andro maro no nosoloina ireo teknolojia vaovao misy ao amin'ny GLib. Ny tena fanatsarana dia:
Ny fiovana lehibe amin'ny 1.6 dia:
Fanohanana ho an'ny Systemd-logind.
Ny fanatsarana ny tontolon'ny BOX, ny rafitra vaovao ary ny fanohanana ny famaritana vaovao momba ny sary kely, ny fifampiresahana vaovao amin'ny mpizara ary maro hafa.
Fanatsarana ny tontonana: azo ampiasaina ny kitendry totozy afovoany hanakatona ny varavarankely, nanampina safidy iray hiova eo amin'ny sehatr'asa misy ny kodiarana totozy, sy maro hafa.
Fanatsarana ao amin'ny Window Manager.
Fanatsarana amin'ny Lectern, Calc sy ny fampiharana hafa.
Fanatsarana daemon fanatsarana.
Fanatsarana sy fanampiana fanampiny amin'ny lohahevitra Gtk2 / Gtk3.
Fanatsarana napetraky ny sary.
Na izany na tsy izany. Vitsy ireo, raha te hahita ny antsipiriany amin'ny zava-drehetra ianao dia afaka mahatratra ny fanambarana ofisialy.
MATE 1.6 Vokatry ny fivoarana 8 volana mahery ary misy fandraisana anjara 1800 nataon'ny olona 39 sy mpandika teny 150 mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Misy MATE 1.6 misy fanatsarana maro
11 hevitra, avelao ny anao
st0rmt4il dia hoy izy:
Nampiasa Mate tao Sabayon aho, saingy misy Bugs betsaka ao aminy, nampiasa ny kinova taloha aho talohan'ity iray ity. Ny iray amin'ireo zavatra tsy afaka natao dia tsy fantatro hoe maninona no tsy azo atao ny mampiseho ireo sary kely ao amin'ny BOX.
Saingy, ndao hojerentsika rehefa misy io fananganana io any sabayon mba hahitana hoe inona izany, izao dia mahazo aina kokoa noho ny Xfce4 aho 😉
Mamaly an'i st0rmt4il
Ruffus- dia hoy izy:
Efa misy mpitantana tambajotra ve ao anatiny? Rehefa apetrako ao amin'ny Debian Wheezy io pelao dia tsy mametraka na inona na inona ary tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi aho. Tsy vahaolana ny Network-Manager-Gnome satria te-hametraka antsasaky ny Gnome Shell izy ary miaraka amin'i Wicd dia tsy afaka amiko ny mifandray amin'ny tambajotra miaraka amin'ny fiarovana azo atao.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy omena fotoana ao anaty VM izy io.
Valio amin'i Ruffus-
»Tsy vahaolana ny Network-Manager-Gnome satria tiany hametraka antsasaky ny Gnome Shell»
Debian classic 😀
"Wicd tsy afaka mifandray amin'ny tambajotra azo antoka."
Inona no olana mahazo anao? Mifandray tsy misy olana amin'ny tamba-jotra WPA / 2 aho.
Ianao ve nanandrana ny kinova CLI an'ny NetworkManager?
Wicd dia tsy manana ny baolina hampifandray ahy amina karazana tambajotra tsy misy tariby soa aman-tsara. Mihantona foana izy io rehefa manandrana manamarina ny lakile ary manary lesoka amin'ny farany. Tsy maninona na WEP-WPA / 2 no tambajotra. Ny kinova LCI dia vahaolana maloto - raha ny hevitro - satria tiako ho interface graphique izy io. Tsy midika izany fa mifanohitra amin'ny programa tsy ampoizina izany. Raha ny marina dia mampiasa maro toy ny MC, Moc, Links, Lxsplit, RTorrent, sns aho. Mampiasa Broadcom 4313 aho amin'ny alàlan'ny mpamily broadcom-sta-dkms.
OtakuLogan dia hoy izy:
Raha apetrakao amin'ny alalàn'ny Synaptic ity, rehefa manamarina ireo fonosana hapetraka ao amin'ny network-manager-gnome ianao dia esorina maromaro. Betsaka ny mametraka na dia manao apt-get –no-install-fahazoan-dàlana aza ianao fa raha esorinao amin'ny Synaptic dia ahafahanao manohy mametraka azy io tsy misy ny fanampiny fanampiny (bluez, modemmanager, sns.). Izy io dia miasa ho ahy, na ny fametrahana na ny fiasan'ny mpitantana.
Raha misy fisalasalana, tsia, Mate 1.6 dia tsy manana mpitantana tambajotra azy manokana.
Mamaly an'i OtakuLogan
Mialà sasatra amin'ny namako fa Wicd dia mbola mpitaingina asa rehetra izay tsy mampiasa DE ary maniry fomba mora hifandraisana tsy misy tariby.
Nahasarika ny saiko ny zavatra lazainao satria:
1) RAHA mifandray amin'ny tambajotra azo antoka ianao
2) Saika tsy misy olona manana olana amin'ity fampiharana ity.
3) Tsy misy na inona na inona voalaza momba ireo kinova farany - Tsy nikaroka kinova taloha na Alphas aho.
Amin'ny tranga manokana, ampiasaiko amin'ny Ubuntu Server 12.04 LTS izay mandeha amin'ny kahie taloha ary noho ny antony tsy fantatra dia 'maty an-drano' ary miafara amin'ny fanantonana interface misy tariby rehefa be ny fivezivezena data.
Amin'ity milina ity dia mampiasa Wicd aho hifandraisako amin'ilay tamba-jotra Wi-Fi voaroaka miaraka amina lakile alphanumeric 20-character ary mandeha EXCE-LEN-TE.
Raha manampy anao izy, ireto no dikan'ireo fonosana napetraka:
[oliva] j: 0 / sns / kaopy $ Wicd SearchLocal
ii python-wicd 1.7.2.3-1ubuntu0.1 mpitantana tambajotra tariby sy tsy misy tariby - Module Python
ii wicd 1.7.2.3-1ubuntu0.1 tariby tariby sy tariby tsy misy tariby - metapackage
ii wicd-curses 1.7.2.3-1ubuntu0.1 mpitantana tamba-jotra sy tariby tsy misy tariby - Curses client
ii wicd-daemon 1.7.2.3-1ubuntu0.1 mpitantana tamba-jotra sy tariby tsy misy tariby - daemon
ii wicd-gtk 1.7.2.3-1ubuntu0.1 mpitantana tamba-jotra sy tariby tsy misy tariby - mpanjifa GTK +
Tsia, raha milamina aho. Fialan-tsiny raha toa ka tsy izany xD
Nampiasa Wicd foana aho, na dia tamin'ny KDE aza. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Ubuntu + Gnome Shell amin'ny solosaina finday aho rehefa miseho ny Debian Stable manaraka. Ary azo antoka, miasa eto Wicd.
Marina ihany koa fa misy ny fampahalalana momba ny olana mitovy amin'izany raha te-hifandray amin'ny tamba-jotra miaraka amin'ny karatra tsy misy tariby Broadcom sy Wicd, fa vaovao 2 taona lasa izay. Ary na dia nanandrana nampihatra ny vahaolana aza aho dia tsy nahomby. Mahamenatra.
Eduardo dia hoy izy:
Rehefa mametraka ny mpitantana ny tambajotra gnome amin'ny:
aptitude mametraka tambajotra-manager
tsy mametraka antsasaky ny Gnome 3 izy io.
Ary ny olan'ny fijerena sary kely boaty dia namboarina tamin'ny rohy an'ohatra:
rm -r $ HOME / .cache / thumbnails
mkdir $ HOME / .cache / thumbnails
rm -r .thumbnails /
ln -s ~ / .cache / thumbnails ~ / .thumbnails
ary hamerenana haingana ny boaty:
Valiny tamin'i Eduardo
satanAG dia hoy izy:
Tsara tokoa, teboka iray fotsiny manohitra: ireo izay avy amin'ny kinova 1.4 amin'ny Debian dia mahita fa somary sarotra ny mahita ny Dconf-tonian-dahatsoratra satria efa tonta ny mateconf-editor ary tsy manao na inona na inona holazainao aminy.
Soso-kevitra: manatsara ny rafitry ny fifindra-monina mba tsy hahatsapana fahasosorana hafa ireo mpampiasa vaovao.
Ny tontolo iainana farafaharatsiny ao amin'ny Debian Wheezy dia matanjaka, milamina ary tsara tarehy tokoa ny lohahevitra sy ny fonosana. Tontolo iainana misy fampandrosoana maharitra.
Mamaly an'i satanAG
Ricardo Lizcano dia hoy izy:
Tiako kokoa ny birao LXDE satria maivana izy ary ny fizarana Squeeze, satria ilay milamina manome fiarovana ahy bebe kokoa.
Linux Debian mametaka LXDE Custom LiveCD amin'ny:
Valiny tamin'i Ricardo Lizcano
Namaky aho dia hoy izy:
Ao amin'ny Debian aho ary tsy mandeha ny Newtwork Manager, rehefa manatanteraka nm-applet ho faka dia mamerina ahy izy io:
** (nm-applet: 4446): FAMPITANDREMANA **: Tsy nahomby tamin'ny fanaovana D-Bus: Tsy nahazo valiny. Ny antony mety misy dia ny: ny rindranasa lavitra dia tsy nandefa valiny, ny politikam-piarovana amin'ny bus bus nanakana ny valiny, tapitra ny ora fiasana, na tapaka ny fifandraisana.
raha toa ka mihazona azy ho mpampiasa mahazatra aho:
(nm-applet: 4464): Gtk-WARNING **: Hadisoana amin'ny famaritana ny lohahevitra: firaisan-tsaina.css: 36: 16: Tsy ampiasaina amin'ny unité intsony. Mihevitra 'px'.
** Hafatra: nesorina tsy ho eo amin'ny faritra fampandrenesana intsony izao ny applet
** Hafatra: applet tafiditra ao anaty faritra fampandrenesana izao
Raha afaka mitari-dalana ahy ianao dia tiako be izany
Mamaly an'i leo
ZevenOS Neptune: Tolo-kevitra mahaliana amin'ny fanandramana Debian
Manova hoditra amin'ny Steam